Ma Nkwa Ho Nhia Wo Sɛnea Ehia Onyankopɔn No (Asomafo Nnwuma 15:20) | Onyankopɔn Dɔ
Nkwa Ho Hia Wo Sɛnea Ehia Onyankopɔn No?
“Wo nkyɛn na nkwa nsuti wɔ.”—DWOM 36:9.
1, 2. Akyɛde a ɛho hia bɛn na Onyankopɔn de ama yɛn nnɛ, na dɛn ntia?
YƐN soro Agya no akyɛ yɛn ade a ɛsom bo. Ɛne sɛ, yɛyɛ abɔde a yɛwɔ nkwa ne adwene a yetumi suasua no. (Genesis 1:27) Akyɛde yi nti, yetumi dwinnwen Bible nnyinasosɛm ho. Sɛ yɛde yɛ adwuma a, yebenya nkɔso wɔ Onyankopɔn som mu sɛ nnipa a wɔdɔ Yehowa na “wɔatete [wɔn adwene] ma etumi hu papa ne bɔne mu nsonsonoe.”—Hebrifo 5:14.
2 Ɛnnɛ ne bere a ehia paa sɛ yedwinnwen Bible nnyinasosɛm ho. Nea enti a ɛte saa ne sɛ da biara, nneɛma sesa wɔ wiase ma enti sɛ wɔhyɛ mmara pii sɛ dɛn ara mpo a, ɛrentumi nni nsɛm a ebesisi yɛn akwan mu no nyinaa ho dwuma. Nea ɛrekɔ so wɔ ayaresa mu no ma yɛte asɛm yi ase, titiriw nea ɛfa nnuru ne akwan a wɔfa so de mogya sa yare ho no. Eyi yɛ asɛnhia ma wɔn a wɔpɛ sɛ wotie Yehowa no nyinaa. Ne nyinaa mu no, sɛ yɛte Bible nnyinasosɛm a ehia ase a, ɛbɛboa yɛn ma yɛasisi gyinae a ɛbɛma yɛanya ahonim pa na yɛde yɛn ho asie Onyankopɔn dɔ mu. (Mmebusɛm 2:6-11) Ma yɛnhwɛ nnyinasosɛm yi bi.
NKWA NE MOGYA YƐ KRONKRON
3, 4. Bere bɛn na Kyerɛwnsɛm no dii kan kae sɛ mogya yɛ kronkron, na egyina nnyinasosɛm bɛn so?
3 Bere a Kain kum Habel no, ankyɛ koraa na Yehowa kyerɛe sɛ nkwa ne mogya wɔ abusuabɔ kɛse na ɛyɛ kronkron nso. Onyankopɔn ka kyerɛɛ Kain sɛ: “Tie! Wo nua no mogya fi asase so reteɛm frɛ me.” (Genesis 4:10) Yehowa ani so no, na Habel mogya gyina hɔ ma ne nkwa a ne nua no twaa so yayaayaw no. Enti yebetumi aka sɛ Habel mogya su frɛɛ Onyankopɔn sɛ ɔntɔ ne so werɛ.—Hebrifo 12:24.
4 Noa bere so Nsuyiri no akyi no, Onyankopɔn maa nnipa kwan sɛ wobetumi adi mmoa nam, na ɛnyɛ wɔn mogya. Onyankopɔn kae sɛ: “Ɔhonam ne ne kra, kyerɛ sɛ, ne mogya, nkutoo na munnni. Na mo kra mogya nso, mebisa.” (Genesis 9:4, 5) Wɔde mmara yi maa Noa asefo nyinaa, na ayɛ adwuma abesi nnɛ. Esi so dua sɛ aba a ɛwɔ Onyankopɔn asɛm a ɔka kyerɛɛ Kain no mu no da so yɛ adwuma—ɛne sɛ, mogya gyina hɔ ma abɔde nyinaa kra anaa wɔn nkwa. Afei nso saa asɛm no kyerɛ sɛ, onipa biara a ɔde nkwa ne mogya bedi agorɔ no, Yehowa, Nkwamafo no, ne no bedi.—Dwom 36:9.
5, 6. Dɛn na Mose Mmara no kae a ɛma yehu sɛ mogya yɛ kronkron na ɛsom bo? (Hwɛ adaka a n’asɛmti ne “ Bu Mmoa Nkwa” no nso.)
5 Mose Mmara no nso ma yehu sɛ mogya gyina hɔ ma nkwa na ɛyɛ kronkron. Yɛkenkan wɔ Leviticus 17:10, 11 sɛ: “Israelni anaa ɔhɔho a wabɛsoɛ mo a obedi mogya biara no, mɛma m’ani asã ɔkra a odi mogya no, na metwa no afi ne man mu. Na ɔhonam biara kra wɔ mogya mu, na afɔremuka no so na mede ama mo sɛ momfa mpata mma mo kra, na mogya na wɔde pata ma bɔne, efisɛ emu na ɔkra no wɔ.” *—Hwɛ adaka a n’asɛmti ne, “ Mogya Wɔ Tumi a Ɛpata Bɔne.”
MOGYA WƆ TUMI A ƐPATA BƆNE
Onyankopɔn Asɛm mu no, mogya yɛ nkwa. Ɛno nti, tete Israel no, sɛ obi bu Yehowa mmara so na onu ne ho a, sɛ́ anka wobebu no fɔ no, otumi de aboa bɔ afɔre wɔ Onyankopɔn afɔremuka so. (Leviticus 4:27-31) Ná saa afɔrebɔ yi pata ne bɔne, nanso na ɛnyɛ afebɔɔ.
Bible mu no, “mpata” kura adwene a ɛne sɛ “wɔhyɛ biribi ananmu” anaa “wɔkata biribi so.” Ɛte sɛ nea ade bi nkataso tumi kata so pɛpɛɛpɛ no. Nokwarem no, aboa biara antumi ‘ankata’ onipa bi bɔne so anaa wampata amma no. Nanso mmoa a na wɔde bɔ afɔre no yɛ mpata afɔre a ɛyɛ pɛ a na ɛbɛba no nsusuwso.—Hebrifo 10:1, 4.
“Wɔnam Yesu Kristo nipadua a wɔde mae prɛko no so” na ɛbɔɔ saa mpata afɔre no. (Hebrifo 10:10) Wɔde “mogya a ɛsom bo . . . , te sɛ oguammaa a dɛm ne nkekae biara nni ne ho” no gyina hɔ ma Kristo desani nkwa a ɛyɛ pɛ no, na ɛte sɛ nkwa a Adam hweree no pɛpɛɛpɛ. (1 Petro 1:19) Enti ɔkwan a wɔnam so buu atɛntrenee maa yɛn no, ɛho wɔ nyam na ɔdɔ wom, na ɛno na yɛnam so nya “daa ogye.”—Hebrifo 9:11, 12; Yohane 3:16; Adiyisɛm 7:14.
6 Sɛ wokum aboa na sɛ wɔremfa ne mogya ngu afɔremuka so a, na ɛsɛ sɛ wohwie gu fam. Enti sɛnkyerɛnne kwan so no, ɛte sɛ nea wɔresan de nkwa no ama ne Wura. (Deuteronomium 12:16; Hesekiel 18:4) Nanso hyɛ no nsow sɛ na ɛho nhia sɛ Israelfo no haw wɔn ho boro so sɛ wɔbɛma mogya no nyinaa afi aboa no mu. Sɛ Israelni nya kum aboa ma ne mogya sɔn sɛnea ɛsɛ a, na obetumi adi a n’ahonim renhaw no, efisɛ mogya no a wahwie agu no kyerɛ sɛ obu Nkwamafo no.
7. Dɛn na Dawid yɛ de kyerɛe sɛ obu mogya sɛ ɛyɛ kronkron?
7 Dawid, “ɔbarima a [Onyankopɔn] koma da no so” no tee nnyinasosɛm a ɛwɔ Onyankopɔn mmara mu a ɛfa mogya ho no ase. (Asomafo Nnwuma 13:22) Bere bi, na osukɔm de no paa, na ne mmarima no mu mmiɛnsa bɔ wuraa wɔn atamfo nsraban mu kɔsaw nsu fii abura mu brɛɛ no. Dɛn na Dawid yɛe? Obisae sɛ: “Mmarima a wɔde wɔn kra too wɔn nsam yi mogya na mennom anaa?” Dawid ani so no, na nsu no te sɛ ne mmarima no mogya. Enti ɛwom sɛ na osukɔm de no deɛ, nanso “ohwie guu fam maa Yehowa.”—2 Samuel 23:15-17.
8, 9. Bere a wɔtew Kristofo asafo no, Onyankopɔn adwene wɔ nkwa ne mogya ho no sesae anaa? Kyerɛkyerɛ mu.
8 Noa bere so Nsuyiri no akyi bɛyɛ mfe 2,400, ne bere a wɔde Mmara apam no mae no akyi bɛyɛ mfe 1,500 no, Yehowa nam honhom so maa tete Kristofo asafo no akwankyerɛ kuw kyerɛwee sɛ: “Honhom kronkron no ne yɛn ankasa nso mpɛ sɛ yɛde adesoa foforo biara to mo so, gye eyinom a ehia yi, sɛ montwe mo ho mfi nneɛma a wɔde abɔ afɔre ama abosom ne mogya ne mmoa a wɔakum wɔn a wɔanhwie wɔn mogya angu ne aguamammɔ ho.”—Asomafo Nnwuma 15:28, 29.
9 Ɛda adi pefee sɛ tete akwankyerɛ kuw no hui sɛ mogya yɛ kronkron, na sɛ obi amfa anni dwuma yiye a, ɛyɛ bɔne te sɛ abosonsom ne aguamammɔ anaa nna mu ɔbrasɛe pɛpɛɛpɛ. Saa ara na nokware Kristofo a wɔwɔ hɔ nnɛ nso gye di. Bio nso, Bible nnyinasosɛm a wɔde susuw nsɛm ho nti, wotumi sisi gyinae a ɛsɔ Yehowa ani wɔ mogya ho nsɛm mu.
AYARESA A WƆDE MOGYA YƐ ADWUMA WOM
Mɛyɛ dɛn ama oduruyɛfo ahu m’adwene wɔ mogya mu nneɛma nketenkete a wɔde di dwuma no ho?
10, 11. (a) Yehowa Adansefo bu mogya ne mogya mu nneɛma atitiriw a wɔde ma obi no sɛn? (b) Mogya ho nsɛm bɛn na ɛbɛsono Kristoni biara adwene wɔ ho?
10 Yehowa Adansefo nim sɛ ‘mogya a wɔbɛtwe wɔn ho afi ho’ no kyerɛ sɛ ɛnsɛ sɛ wogye mogya, wɔtwe ma afoforo, anaa wɔtwe wɔn ankasa de si hɔ na akyiri yi wɔasan de ama wɔn. Wobu Onyankopɔn mmara, enti wonnye nneɛma atitiriw nnan a ɛbom yɛ mogya no nso: mogya mu nkwammoaa kɔkɔɔ, mogya mu nkwammoaa fitaa, mogya mu nkwammoaa ntraantraa, ne mogya mu nsu.
11 Ɛnnɛ wotumi fa akwan bi so kyekyɛ mogya mu nneɛma atitiriw yi biara mu nketenkete, na wɔde yɛ nneɛma pii. Kristoni betumi agye mogya mu nneɛma nketenkete a ɛte saa anaa? So obebu no sɛ ɛyɛ “mogya”? Eyi yɛ asɛm a ɛsɛ sɛ obiara si ho gyinae. Ɛsɛ sɛ obiara si ne gyinae nso wɔ nnuruyɛ bi a wɔde onipa no ankasa mogya yɛ adwuma te sɛ mogya a wɔsɔn so wɔ afiri mu (hemodialysis), mogya a wɔfra mu (hemodilution), ne mogya a wɔma ɛsan begu nipadua mu wɔ oprehyɛn mu (cell salvage). Nanso nea wɔatwe asi hɔ nka ho.—Hwɛ Nkekaho a n’asɛmti ne “Mogya mu Nneɛma Nketenkete ne Ayaresa Ahorow Bi.”
12. Dɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ wɔ nsɛm a obiara betumi de n’ahonim asi ho gyinae mu?
12 Sɛ obiara betumi asi gyinae a ɔpɛ wɔ asɛm bi ho a, ɛno kyerɛ sɛ nea ɔbɛyɛ no mfa Yehowa ho anaa? Ɛnte saa, efisɛ nea yedwen ho ne nea ɛwɔ yɛn komam no ho hia Yehowa yiye. (Kenkan Mmebusɛm 17:3; 24:12.) Enti sɛ yɛbɔ mpae yɛ nhwehwɛmu hu aduru anaa ayaresa ho nsɛm bi a, ɛsɛ sɛ yetie yɛn ahonim a yɛde Bible atete no no. (Romafo 14:2, 22, 23) Nanso ɛnyɛ afoforo ahonim na ɛsɛ sɛ ɛkyerɛ yɛn nea yɛnyɛ, na saa ara nso na ɛnsɛ sɛ yebisa afoforo sɛ, “Sɛ ɛyɛ wo a, anka wobɛyɛ dɛn?” Nsɛm a ɛte saa mu no, Kristoni biara “bɛsoa n’ankasa adesoa.” *—Galatifo 6:5; Romafo 14:12; hwɛ adaka a n’asɛmti ne, “ So Mibu Mogya sɛ Ade Kronkron?”
SO MIBU MOGYA SƐ ADE KRONKRON?
Nnyinasosɛm: ‘Montwe mo ho mfi mogya ho.’—Asomafo Nnwuma 15:20.
Mɛyɛ dɛn akyerɛkyerɛ nsonsonoe a ɛwɔ nneɛma atitiriw nnan a ɛbom yɛ mogya ne mogya mu nneɛma nketenkete no mu? *
Dɛn nti na ɛsɛ sɛ m’ankasa misi gyinae sɛ ebia megye mogya mu nneɛma nketenkete anaa merennye, anaasɛ mɛpene so ma wɔde m’ankasa me mogya ayɛ adwuma wɔ m’ayaresa mu?—Romafo 12:2; Galatifo 6:5.
Mɛyɛ dɛn akyerɛkyerɛ nea enti a megye mogya mu nneɛma nketenkete anaa merennye no mu akyerɛ me duruyɛfo?—Mmebusɛm 13:16.
YEHOWA MMARA KYERƐ SƐ ƆYƐ AGYA A ƆWƆ ƆDƆ
13. Dɛn na Yehowa mmara ne ne nnyinasosɛm ma yehu wɔ ne ho? Kyerɛkyerɛ mu.
13 Mmara ne nnyinasosɛm a ɛwɔ Bible mu no ma yehu sɛ Yehowa yɛ Mmarahyɛfo nyansafo ne Agya a ɔwɔ ɔdɔ a odwen ne mma yiyedi ho kɛse. (Dwom 19:7-11) Ɛwom, ɛnyɛ ayaresa nti na wɔhyɛɛ mmara sɛ ‘yɛntwe yɛn ho mfi mogya ho,’ nanso ɛbɔ yɛn ho ban na yɛannya nyarewa a wɔn a wogye mogya tumi nya no bi. (Asomafo Nnwuma 15:20) Nokwarem no, nnuruyɛfo pii kyerɛ sɛ ɛnnɛ, ayaresa a eye paa ne sɛ bere a wɔreyɛ obi oprehyɛn no, wɔremma no mogya. Nokware Kristofo deɛ, nsɛm a ɛtete saa no si so dua ma wɔn sɛ Yehowa nyansa nni ano, na ɔyɛ Agya a ɔwɔ ɔdɔ.—Kenkan Yesaia 55:9; Yohane 14:21, 23.
14, 15. (a) Mmara bɛn na ɛma yehu sɛ Onyankopɔn dɔ ne nkurɔfo? (b) Wobɛyɛ dɛn de mmara a ɛbɔɔ wɔn ho ban yi mu nnyinasosɛm ayɛ adwuma?
14 Onyankopɔn mmara a ɔde maa tete Israel no pii ma ɛda adi sɛ odwen ne nkurɔfo ho. Ɛho nhwɛso baako ne sɛ, sɛ Israelni si fie a, na mmara no hwehwɛ sɛ ogye ban wɔ dan no atifi na obi amfi hɔ ammɛhwe fam, efisɛ na wɔtaa yɛ nneɛma pii wɔ hɔ. (Deuteronomium 22:8; 1 Samuel 9:25, 26; Nehemia 8:16; Asomafo Nnwuma 10:9) Onyankopɔn hyɛɛ mmara nso sɛ wɔnhwɛ wɔn anantwi yiye na wɔankɔpem obi. (Exodus 21:28, 29) Sɛ obi bu n’ani gu mmara a ɛtete saa so a, na ɛkyerɛ sɛ onnwen afoforo yiyedi ho koraa na ebetumi ama wadi mogya ho fɔ.
15 Wobɛyɛ dɛn de mmara yi mu nnyinasosɛm ayɛ adwuma? Wubetumi abisa wo ho sɛ, me kar ne me karka te sɛn? Me nyɛmmoa, me fie, m’adwuma mu, ne nneɛma a mede gye m’ani nso te sɛn? Aman bi so no, akwanhyia na ekunkum mmerante ne mmabaa kɛse, efisɛ wɔyɛ nneɛma a ɛho nhia de wɔn nkwa to asiane mu. Nanso mmerante ne mmabaa a wɔpɛ sɛ wɔtena Onyankopɔn dɔ mu no bu nkwa ma enti wɔnyɛ nneɛma a ebetumi atwa wɔn nkwa so mfa nnyigye wɔn ani. Wonni mmofrasɛm nsusuw sɛ woyɛ aberante anaa ababaa a, biribiara ntumi nyɛ wo. Mmom wɔpɛ sɛ wɔn ani gye wɔn mmabunbere mu, enti wɔnyɛ nneɛma a ɛbɛma wɔahu amane.—Ɔsɛnkafo 11:9, 10.
16. Bible nnyinasosɛm bɛn na ɛfa nyinsɛn a woyi gu ho? (Hwɛ ase hɔ asɛm no nso.)
16 Nkokoaa a wɔhyɛ yafunu mu mpo nkwa som bo wɔ Onyankopɔn ani so. Tete Israel no, sɛ obi kɔpem ɔpemfo na sɛ ɔbea no anaasɛ ne ba no wu a, Onyankopɔn fa no sɛ onii no akum onipa, enti ɛsɛ sɛ ɔde ‘ɔkra si ɔkra ananmu.’ * (Kenkan Exodus 21:22, 23.) Enti hwɛ sɛnea Yehowa bɛte nka bere a ohu sɛ afe biara nkurɔfo hyɛ da yi mmofra a wɔhyɛ yafunu mu mpempem pii gu no. Adwene a nnipa pii de yɛ saa ne sɛ wɔpɛ sɛ wɔyɛ nea wɔn ho bɛtɔ wɔn na wobu bra biara a wɔpɛ.
17. Sɛ ɔbea bi yii nyinsɛn gui ansa na ɔresua Onyankopɔn mmara a, dɛn na wobɛka de akyekye ne werɛ?
17 Na sɛ ɔbea bi yii nyinsɛn gui ansa na ɔrebesua Bible nso ɛ? Onyankopɔn renhu no mmɔbɔ anaa? Ɛnte saa koraa! Nokwasɛm ne sɛ, Yehowa begyina Yesu mogya a ohwie gui no so de ɔbɔnefo a onu ne ho ampa no bɔne afiri no. (Dwom 103:8-14; Efesofo 1:7) Kristo ankasa mpo kae sɛ: “Mamma sɛ merebɛfrɛ treneefo, na mmom merebɛfrɛ nnebɔneyɛfo de wɔn akɔ adwensakra mu.”—Luka 5:32.
NNYA NNIPA HO ADWEMMƆNE!
18. Bible mu asɛm bɛn na ɛma yehu nea enti a nkurɔfo taa di awu no?
18 Yehowa mpɛ sɛ yepira afoforo. Nanso ɔmpɛ sɛ yɛde sõ hɔ ara; ɔpɛ sɛ yeyi ɔtan a ɛtaa ma nkurɔfo di awu no nso fi yɛn komam. Ɔsomafo Yohane kyerɛwee sɛ: “Obiara a ɔtan ne nua no yɛ owudifo.” (1 Yohane 3:15) Onipa a ɔte saa no, ɛnyɛ sɛ ɔmpɛ ne nua no asɛm kɛkɛ, na mmom ne yam a, anka wawu. Ebia ɔkwan a onii no bɛfa so akyerɛ sɛ ɔtan obi ne sɛ ɔbɛsɛe ne din anaasɛ ɔbɛbɔ no sobo a sɛ asɛm no yɛ nokware a, anka Yehowa bebu no atɛn. (Leviticus 19:16; Deuteronomium 19:18-21; Mateo 5:22) Enti ɛho hia sɛ yɛbɔ mmɔden yi afoforo ho adwemmɔne biara fi yɛn komam!—Yakobo 1:14, 15; 4:1-3.
19. Nnipa a wɔde Bible nnyinasosɛm yɛ adwuma no bebu Dwom 11:5 ne Filipifo 4:8, 9 sɛn?
19 Wɔn a nkwa ho hia wɔn sɛnea ehia Yehowa a wɔpɛ sɛ wɔde wɔn ho sie Onyankopɔn dɔ mu no mfa wɔn ho nhyɛ biribiara a awudisɛm wom mu. Dwom 11:5 ka sɛ: “Obiara a n’ani gye awudisɛm ho no, [Yehowa] kra kyi no koraa.” Ɛnyɛ su a Onyankopɔn wɔ nko na kyerɛwsɛm yi ma yehu; mmom ɛyɛ nnyinasosɛm a ɛsɛ sɛ yɛde bɔ yɛn bra. Ɛka wɔn a wɔdɔ Onyankopɔn no ma enti wɔmfa biribiara a ɛbɛma obi ani agye awudisɛm ho nnye wɔn ani. Afei nso esiane sɛ wɔka sɛ Yehowa yɛ “asomdwoe Nyankopɔn” nti, n’asomfo de nea ɛyɛ fɛ, ɔbra pa ne nea ɛsɛ ayeyi ne nea ɛde asomdwoe ba hyɛ wɔn adwene ne wɔn koma mu.—Kenkan Filipifo 4:8, 9.
TWE WO HO FI AKUW A WODI MOGYA HO FƆ HO
20-22. Kristofo yɛ wɔn ade sɛn wɔ wiase no ho, na dɛn ntia?
20 Onyankopɔn bu Satan wiase no nyinaa sɛ edi mogya ho fɔ. N’amammui nhyehyɛe a Kyerɛwnsɛm no ka ho asɛm sɛ ɛte sɛ aboa a ne ho yɛ hu no akunkum nnipa ɔpepem pii, na Yehowa asomfo bebree mpo ka ho. (Daniel 8:3, 4, 20-22; Adiyisɛm 13:1, 2, 7, 8) Aguadifo ne nyansahufo a wɔne wiase tumidi a ɛte sɛ aboa no redi nsawɔso no ayeyɛ akode hyeaman a ɛso bi mmae da, na wɔanya wɔn ho tam. “Wiase nyinaa da ɔbɔnefo no tumi mu” ampa!—1 Yohane 5:19.
21 Yesu akyidifo nyɛ “wiase no fã,” na wɔne amanyɔsɛm nni hwee yɛ na wɔnkɔ ko nso. Ɛno nti wɔn ankasa nni mogya ho fɔ na akuw a wodi mogya ho fɔ asodi biara nna wɔn so. * (Yohane 15:19; 17:16) Wosuasua Kristo, enti sɛ afoforo taa wɔn a, wɔne wɔn mfa nsi ani. Mmom no, wɔdɔ wɔn atamfo, na wɔbɔ mpae mpo ma wɔn.—Mateo 5:44; Romafo 12:17-21.
22 Nea ɛsen ne nyinaa no, nokware Kristofo twe wɔn ho fi “Babilon Kɛse,” a ɛyɛ wiase nyinaa atoro som ahemman a edi mogya ho fɔ kɛse paa no ho. Onyankopɔn Asɛm ka sɛ: “Ne mu na wohuu adiyifo ne akronkronfo ne wɔn a wɔakunkum wɔn asase so nyinaa mogya.” Enti wɔbɔ yɛn kɔkɔ sɛ: “Mumfi ne mu, me man.”—Adiyisɛm 17:6; 18:2, 4, 24.
23. Sɛ wɔka sɛ yɛntwe yɛn ho mfi Babilon Kɛse ho a, ɛkyerɛ sɛn?
23 Sɛ obi twa ne din mu fi asɔre bi mu a, ɛno nkutoo nkyerɛ sɛ ɔne Babilon Kɛse no atwam koraa. Nea ɛsɛ sɛ onii no yɛ ka ho ne sɛ obekyi nnebɔne a atoro som pene so anaa wogye tom no. Ebi ne ɔbrasɛe, amanyɔsɛm, ne sikanibere. (Kenkan Dwom 97:10; Adiyisɛm 18:7, 9, 11-17) Hwɛ sɛnea saa nneɛma yi taa de mogyahwiegu ba!
24, 25. (a) Sɛ obi a odi mogya ho fɔ nu ne ho a, dɛn na Onyankopɔn gyina so de ne bɔne firi no? (b) Eyi kae yɛn nhyehyɛe bɛn wɔ Bible mu?
24 Ansa na yɛrebehu nokware som no, na yɛn mu biara boa Satan wiase no wɔ ɔkwan bi so, enti yebetumi aka sɛ yedii mogya ho fɔ. Nanso, yɛsakrae na yenyaa Kristo agyede afɔre no mu gyidi, na yehyiraa yɛn nkwa so maa Onyankopɔn. Ɛno nti Onyankopɔn huu yɛn mmɔbɔ na ɔbɔɔ yɛn ho ban wɔ honhom mu. (Asomafo Nnwuma 3:19) Ahobammɔ a ɛte saa no ma yɛkae guankɔbea nkurow a wɔaka ho asɛm wɔ Bible mu no.—Numeri 35:11-15; Deuteronomium 21:1-9.
25 Ná saa nhyehyɛe no te sɛn? Sɛ Israelni nsa pa na okum obi a, na ɛsɛ sɛ oguan kɔ guankɔbea nkurow no bi mu. Sɛ atemmufo a wɔfata hwehwɛ asɛm no mu wie a, onipakumfo no tena guankɔbea kurow no mu kosi sɛ ɔsɔfopanyin no bewu. Afei obetumi akɔtena baabi a ɔpɛ. Eyi nyɛ nhwɛso fɛfɛ a ɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn wɔ mmɔborɔhunu na obu nnipa nkwa anaa? Sɛnea na tete guankɔbea nkurow te no, Onyankopɔn ayɛ nhyehyɛe bi saa, na egyina Kristo afɔre no so. Enti sɛ yɛanhyɛ da na yebu Onyankopɔn mmara a ɛkyerɛ sɛ nkwa ne mogya yɛ kronkron no so a, saa nhyehyɛe yi gye yɛn fi owu mu. W’ani nsɔ nhyehyɛe yi? Dɛn na woyɛ a, ɛbɛkyerɛ sɛ w’ani sɔ? Ade baako a wubetumi ayɛ ne sɛ nhyehyɛe a Onyankopɔn de bɔ yɛn ho ban no, wobɛto nsa afrɛ afoforo ama wɔabegye atom. Seesei a “ahohiahia kɛse” no rebɛn ntɛmntɛm yi, saa bere yi paa na ehia sɛ woyɛ saa.—Mateo 24:21; 2 Korintofo 6:1, 2.
KA AHENNI ASƐM NO FA KYERƐ SƐ WUBU NKWA
26-28. Ɔkwan bɛn so na tebea a yɛwom nnɛ no te sɛ odiyifo Hesekiel de no, na yɛbɛyɛ dɛn de yɛn ho asie Onyankopɔn dɔ mu?
26 Onyankopɔn nkurɔfo a wɔwɔ hɔ nnɛ no tebea ma yɛkae odiyifo Hesekiel a ɔtenaa ase tete no. Yehowa paw no sɛ ɔnyɛ ɔwɛmfo a ɔbɛbɔ Israel man no kɔkɔ ama no. Onyankopɔn kae sɛ: “Tie m’anom asɛm na fa bɔ wɔn kɔkɔ ma me.” Sɛ Hesekiel anyɛ adwuma no na wobuu Yerusalemfo atɛn kunkum wɔn a, anka ɛbɛma wɔn mogya ho asodi abɛda no so. (Hesekiel 33:7-9) Nanso Hesekiel tiei ma enti wanni mogya ho fɔ.
27 Ɛnnɛ, Satan wiase no nyinaa awiei abɛn. Enti Yehowa Adansefo bu no sɛ ɛyɛ wɔn asɛde na ɛyɛ hokwan sɛ wɔbɛka Onyankopɔn “aweredi da” bere a wɔreka Ahenni asɛm no. (Yesaia 61:2; Mateo 24:14) Woreyɛ adwuma a ɛho hia yi bi denneennen? Ɔsomafo Paulo amfa n’asɛnka adwuma anni agorɔ. Ɛno nti otumi kae sɛ: “Me ho afi wɔ nnipa nyinaa mogya ho, efisɛ mamfa Onyankopɔn agyinatu biara ankame mo.” (Asomafo Nnwuma 20:26, 27) Nhwɛso pa a yebetumi asuasua bɛn ara ni!
28 Nanso sɛ yɛde yɛn ho besie Agya pa Yehowa dɔ mu a, ɛnyɛ nea ehia ara ne sɛ yebebu nkwa ne mogya sɛnea Yehowa bu no no. Ɛsɛ sɛ yɛma yɛn ho nso tew anaa yɛyɛ kronn wɔ n’ani so, na ɛno na yebesua wɔ ti a edi hɔ no mu.
^ nky. 5 Nsɛmma nhoma bi kaa Onyankopɔn asɛm a ɛne sɛ ‘mogya mu na ɔkra no wɔ’ no ho asɛm sɛ: “Yebetumi afa saa asɛm no sɛ kasakoa deɛ, nanso sɛ yɛfa no sɛnea ɛte no ara nso a, ɛyɛ nokware: sɛ yɛbɛtena nkwa mu a, egyina mogya nkwammoaa no biara so.”—Scientific American.
^ nky. 12 Hwɛ August 2006 Awake! a Yehowa Adansefo tintimii no kratafa 3-12.
^ nky. 16 Bible nsɛm asekyerɛ nhoma akyerɛwfo ka sɛ sɛnea wɔkaa asɛm no wɔ Hebri kyerɛwsɛm yi mu no “da adi sɛ asɛm no ntumi mfa ɔbea no nkutoo a biribi bɛyɛ no ho.” Hyɛ no nsow nso sɛ Bible nka sɛ gye sɛ akokoaa no adi asram dodow bi ansa na Yehowa abu onii no atɛn.
^ nky. 21 Hwɛ Ti 5, “Sɛnea Yɛbɛtwe Yɛn Ho Afi Wiase no Ho.”
^ nky. 70 Sɛ wopɛ eyi ho nsɛm pii a, hwɛ Nkekaho a n’asɛmti ne “Mogya mu Nneɛma Nketenkete ne Ayaresa Ahorow Bi” no.
BU MMOA NKWA
Ɛwom, Yehowa ama yɛn kwan sɛ yetumi kum mmoa de yɛ aduan, de yɛ ntade, na yetumi kum wɔn nso na wɔanni yɛn bɔne, nanso ɛsɛ sɛ yɛde saa hokwan yi yɛ adwuma yiye. (Genesis 3:21; 9:3) Yɛmpɛ sɛ yɛyɛ sɛ ɔbɔmmɔfo tirimɔdenfo Nimrod a ɛbɛyɛ sɛ okunkum mmoa de gyigyee n’ani no. (Genesis 10:9) Mmom no, ɛsɛ sɛ yesuasua Yehowa, efisɛ odwen mmoa nyinaa ho, a nkasanoma mpo ka ho.—Yona 4:11; Mateo 10:29.
Yehu sɛnea Onyankopɔn ani kũ mmoa ho no wɔ Mose Mmara no mu. (Exodus 23:4, 5, 12; Deuteronomium 22:10; 25:4) Nea ɛne saa Mmara no hyia no, Mmebusɛm 12:10 ka sɛ: “Ɔtreneeni ani kũ n’afieboa kra ho, na ɔbɔnefo mmɔborɔhunu yɛ atirimɔden.” Ɛrenkyɛ, wobeyi atirimɔdenfo ne wɔn akwammɔne nyinaa afi hɔ.